Misoria - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Missouri)
Ny Missouri dia firenena any Etazonia, ny renivohiny dia Jefferson City. Misy mponina 5.878.415 any. Missouri dia nomena anarana avy amin'ny foko amerikanina Missouri. Avy amin'ny teny hoe ouemessourita izy io, izay midika hoe "olona lakana hazo", na "ireo manana lakana".
Missouri dia manamorona an'i Iowa any avaratra; Illinois, Kentucky, ary Tennessee any atsinanana; Arkansas any atsimo; ary Oklahoma, Kansas, ary Nebraska any andrefana. Ny sisin-tany atsinanan'ny fanjakana dia saika noforonin'ny Reniranon'i Mississippi avokoa.
Tamin’ny 1682, dia nisy velaran-tany midadasika antsoina hoe Faritanin’i Louisiana, izay nahitana ny tany ho lasa Missouri, no notakian’i Frantsa. Nofehezin’i Espaina izy io, valopolo taona tatỳ aoriana, nefa tsy naharitra ela izany: Naverin’i Espaina tany Frantsa ilay faritany tamin’ny 1800. Tamin’ny 1803, dia nividy ilay tany i Etazonia rehefa nanao sonia ny Fifanarahana momba ny Fividianana Louisiana. Herintaona taorian’izay, dia niainga avy tao amin’ny tanànan’i St. Louis ireo Amerikanina mpikaroka, Meriwether Lewis sy William Clark, mba hijery sy hanao sarintany an’io tany midadasika io. Tamin'ny 1821 dia lasa fanjakany i Missouri.
Jereo koa/Lahatsoratra ilainaHanova
↑ Missouri State History
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Misoria&oldid=1040177"
Dernière modification le 23 Novambra 2021, à 04:45
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2021 amin'ny 04:45 ity pejy ity.